Adeemsi Ministeera Muummee filachuu iftoominaan kan gaggeeffamu ta’uu ibsame
Adeemsi Ministeera Muummee filachuu iftoominaan kan gaggeeffamu ta’uu ibsame Featured
Obbo Shifarraa Shugguxee wayita ibsa kennanitti
Finfinnee: Adeemsi Muummicha Ministeeraa filachuu akkaataa hojmaata ADWUItiin bifa dhokataa hintaaneen torbe dhufu keessa kan gaggeeffamu ta’uu Waajjirri ADWUI ibse.
Itti gaafatamaan waajjirichaa Obbo Shifarraa Shugguxee Roobii darbe waajjirasaaniitti Gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti, Koreen raawwachiistuu hojii ADWUI Bitootessa 2 bara 2010 irraa eegalee raawwii hojiilee ji’oota jahaa dhaabaafi mootummaa gamaggamuuf walgahii adeemsisa. Kanaanis, dhimmoota nageenyaarratti bal’inaan marii’achuun kallattii kaa’uurra darbee hanqinoota hoggansaa guuttachuuf filannoon miseensotaa gaggeeffamuun Mana Maree dhaabichaaf dhiyaachuun kan raggaasifaman ta’uu ibsaniiru.
Erga miseensotni koree raawwachiistuu hojii ADWUI filamanii boodas walgahiin Mana Maree dhaabichaa kan gaggeeffamu waan ta’eef, akkaatuma hojmaataafi dambiiwwan duraanii hordofuun filannoon hoggantoota olaanaa ni adeemsifamaa jedhaniiru.
Dura taa’aan ADWUIs wayituma kana kan filamu yoo ta’u, haala iftoomina qabuufi dur barameen hogganaa dhaabicha sirnaan gaggeessee tarkaanfachiisuutu filamaa jechuun dubbatniiru. Sababa filannoon kun tureefis rakkoo nageenyaan walqabatee jiru ta’uusaa eeranii, waldhabdeen paartilee arfan(DHDUO, WDSA, ABUTfi WDUK) gidduutti waan uumameef mitii jedhaniiru. Rakkooleen tokko tokko garuu kan jiran ta’uu himanii, ilaalcha aangoo walsaamuuf taasifamu akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Kunimmoo dogoggora ta’uusa irratti kan waliigalame waan ta’eef, filannoo dura taa’aa dhaabichaa bakka buusuuf taasifamurratti rakkoon mudatu hinjiruu jedhaniiru; yoo mudates hojmaata taa’ee jiruun kan furamu ta’uus ibsaniiru.
Akka heerri biyyattii keewwatni 73/2 ibsutti, paartiin Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa keessaa teessoo caalmaa qabu ykn qaban mootummaa hundeessuufi muummicha ministeera filachuu danada’a/u. ADWUIn ammoo akka paartii tokkootti mootummaa hundeessee biyya bulchaa waan jiruuf, hogganaa biyyattii gaggeessuuf dandeettiifi gahumsa qabu iftoominaan filachuuf qophiin xumuramuusaa eeraniiru.
Adeemsa filannoo keessattis harki mootummoota alaa kan hinseenne ta’uus himanii, ADWUIn hojii biyya gaggeessuufi misoomsuu akkasumas sirna ijaarsa dimokiraasii jajjabeessuuf gahumsaafi muuxannoo olaanaa kan qabu ta’uusaallee addeessaniiru.
Sirna mootummaa misoomawaa ADWUIn waggoota kurnan lamaan darban keessatti hordofaa ture kana ciminaan haaressuun guddinaafi qaroomina biyyattii galmaan gahuufis kutannoon kan hojjetan ta’uu hubachiisaniiru.
Torban kana/This_Week 10596
Torban darbe/This_Month 96953
Guyyaa mara/All_Days 1435376